Bogga ugu weyn 7 Talaabo Oo Fudud Oo Ku Saabsan Sida Loo Bedelo Bangiyada Adigoon Walbahaar Lahayn | Tilmaan Buuxo
Ka guurista hal bangi una gudubto kan kale qasab ma aha inay noqoto mid aad u adag. Waxa ugu muhiimsan waa ogaanshaha sida loo beddelo bangiyada - maadaama aadan rabin inaad ka gudubto xumaanta oo aad u sii xumaato.
Aynu ku tusno tallaabo -tallaabo sida loo beddelo bangiyada iyada oo aan walwal lahayn.
Inkastoo beddelidda bangiyada ay tahay fikrad wanaagsan, samaynta doorashada bilowga ah waxay noqon kartaa mid aad u culus. Dadku waxay ka walwalsan yihiin inay lumin karaan lacagtooda ama ay la kulmaan dhibaatooyin badan. Si kastaba ha ahaatee, tani ma aha sidaas! Waxaad si fudud u beddeli kartaa bangiyada oo lacagtiina kuma lumin doontaan.
Dadku waxay u beddelaan bangiyada sababo badan awgood. Qaar baa ku jiri kara; u guurista gobol kale, qiimayaal sare, lacag dheeraad ah, iyo dhibaatooyin kale oo soo wajahay qabashada arrimaha maaliyadeed.
Haddii aad la kulanto mid ka mid ah arrimahan, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad beddeli lahayd bangiyada.
Qabso dhalo biir ah haddii aad awooddo, aan ku tusno sida loo beddelo bangiyada iyada oo aan walwal lahayn!
Sida Loo Bedelo Bangiyada Si Fudud?
Beddelidda bangiyada khasab ma aha inay noqdaan kuwo walaac badan. Iyadoo aan loo eegin sababtaada, waxaad si fudud ugu beddeli kartaa bangiyada.
Aynu aragno sida aan si fudud ugu beddeli karno bangiyada?
#1. Dooro Bangi Cusub
Tallaabada ugu horreysa ee beddelidda bangiyada waa in la go'aamiyo bangiga cusub ee ku siin doona khibrad bangi oo wanaagsan sida; heerka kaydka wanaagsan, bangiga guurguura ee firfircoon, adeegga macmiilka oo wanaagsan, iyo kuwo kale.
Xad ha saarin shuruudaha xulashadaada, sahamin dhammaan aagagga bangiyada ka hor intaadan dooran. Waxa kale oo aad eegi kartaa ururada amaahda, bangiyada dhaqanka, iyo bangiyada onlaynka ah.
Ha welwelin, hoos ayaan ku sharxay.
Kuwani waa hay'ado maaliyadeed oo ay macaamiishu leeyihiin. Maadaama xubnaheedu ay xukumaan iyaga, waxay ku shaqeeyaan qiime aan faa'iido doon ahayn waxayna ku bixiyaan credit xubintooda heerar wanaagsan.
Kuwani waa bangiyada leben-ka-hoobiye (tusaale ahaan bangiyada leh laamo dhan). In kasta oo ay u ekaan karaan gabow, haddana waxay siiyaan adeegyo badan iyo ku -habboonaan dadka isticmaala.
Sida magacu tilmaamayo, adeegyadiisu waa onlayn. Uma baahnid inaad la xiriirto si aad u qabato hawlaha maaliyadeed. Sidaa darteed, waxay ka kooban yihiin dulsaar hooseeya iyo khibrad bangi oo wanaagsan.
Hubi inaad si habboon u marayso shardiga bangiga cusub si aad u hubiso inuu buuxiyay shuruudahaaga ka hor intaadan beddelin bangiyada.
#2. Koonto Cusub Ku Fur Akoon
Hadda waxaad dooratay bangiga cusub ee aad rabto inaad ku beddesho, tallaabada xigta waa inaad xisaab furto. Nasiib wanaag, furitaanka koonto waa mid aad u fudud. Waxaad booqan kartaa laanta oo shaqaaluhu waxay kugu hagi doonaan hawsha. Haddii ay tahay bangi onlayn ah, raac uun tallaabooyinka mareegtooda.
Si kastaba ha ahaatee, ma aha geedi socod walaac leh.
Waxaad u baahan doontaa dukumentiyadaan.
Aqoonsiga (sida liisanka darawalnimada)
Magaca loo -shaqeeyaha iyo macluumaadka xiriirka (haddii la samaynayo deebaaji otomaatig ah)
Sidoo kale, waxaad u baahan doontaa inaad dhigto qaddar lacag ah sida uu bangigu kaaga baahan yahay. Lacagtan waxaa loo isticmaalaa in lagu furo ama lagu hayo koontada.
#3. Dhaqaajiso Dhammaan Lacag -bixinta Tooska ah
Ka dib markaad si guul leh u abuurtay koonto cusub, waad sii socon kartaa oo waxaad samayn kartaa dhammaan lacagahaaga tooska ah. Taasi waa, biilasha ku xiran koontadaada oo si otomaatig ah loo bixiyo marka ay dhacaan. Lacag -bixinta sida Kirada, rukunka Netflix, biilasha korontada (korontada ama gaaska), biilasha taleefanka (taleefoonka dhulka iyo taleefanka gacanta), biilasha biyaha iyo bullaacadaha, iyo canshuuraha.
Aad qaybta lacagtaas lagu bixiyo; tusaale ahaan adeegsiga PayPal, oo beddel faahfaahinta koontadaada bangiga. Sidoo kale, cusboonaysii macluumaadka koontadaada cusub ee shaqada si jeeggaaga aan loogu dirin koontadaadii hore.
Haddii aad furatay koontadaada bangiga cusub ujeedada ah inaad iska ilaaliso khidmadaha, maskaxda ku hay inaad u baahan karto inaad lacag badan ku wareejiso si aad u daboosho biilashaada.
Eeg? beddelidda bangiyada ma aha mid walaac badan. Aan sii wadno si aan u aragno tallaabada xigta.
#4. Wareeji Lacagtaada Dhammaan
Hore u soco oo ka wareeji lacagtaada koontadaadii hore/bangiga bangiga cusub. Si kastaba ha ahaatee, ku hay xoogaa lacag ah koontadaadii hore si aad ugu daboosho wixii lacag bixin otomaatig ah ee aan la nadiifin.
Si aad u wareejiso, waxaad isticmaali kartaa hababka lacag -bixinta elektiroonigga ah iyo jeegag la xaqiijiyay - marka laga reebo qaadista lacag caddaan ah oo ka timaadda bangiga kale. Laakiin labaduba waxay hayn doonaan lacagtaada dhawr maalmood.
#5. Bilow Isticmaalka Koontadaada Cusub
Hadda oo koontadaada cusubi furan tahay, haysato lacagihiiaga, oo aad helayso dakhligaaga, waxaad bilaabi kartaa inaad u isticmaasho si aad u bixiso biilashaada, aado dukaamaysiga, ama aad samayso wax kasta oo aad doorato.
Wax lacag -bixin ah ama wax -kala -iibsi ah ha ka samayn koontadaadii hore, hana xidhin.
Isha ku hay koontadaadii hore ugu yaraan laba wakhti oo ah bayaan xisaabeed.
Maadaama aad ku wareejisay dhammaan deymahaaga iyo deymahaaga koontada cusub, koontadaadii hore ma laha wax dhaqdhaqaaq ah. Haddii wax macaamil ah ay soo baxaan, isla markiiba ku xalliso bangigaaga hore.
#6. Xir Xisaabtaada
Hadda oo aad bilowday isticmaalka koontadaada cusub oo aad hubto in koontadii hore aysan u adeegayn wax ujeedo ah, waad sii socon kartaa oo xiri kartaa.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad soo dirto warqad ama aad booqato bangiga adiga oo wata aqoonsigaaga iyo dukumentiyada kale si aad u xirto koontada. Kahor intaadan bixin, hubi in bangigaagii hore uu ku siiyo dokumenti sheegaya in koontadu xidhan tahay.
Sidaan u ilaali si habboon maadaama ay ku badbaadin doonto haddii ay dhacdo inay xiraan koontada.
#7. La Soco Koontadaadii Hore
Ha joojin kaliya isticmaalka koontadaadii hore oo u qaad inay xiran tahay. Waxaad u baahan doontaa dukumiinti bangiga laftiisa oo muujinaya inay ka warqabaan inaad xisaabtaada xirtay. Tani waa sababta oo ah bangiyada ayaa mararka qaarkood dib u furi doona akoonno ay macaamiishu xireen iyagoon ogeysiin.
“Mid ka mid ah siyaabaha ay dib u furi karaan waa, xitaa ma aha qaladkaaga. Jeeg ayaa soo baxaya, bangiguna wuxuu u isticmaali karaa fursaddaas inuu dib u furo koontada oo uu kugu soo dallaco khidmad soo daahday, khidmad dheeraad ah, ka hor intaadan ogaanin, waxaad helaysaa wicitaan aad ku leedahay bangiga $ 100 oo aad tahay xitaa ma oga in bangigu dib u furay koontadaada. Waxaa loogu yeeraa koontada Zombie, ”ayuu yiri Bangiyada.
Sidaa darteed, Xusuusi naftaada si aad u wacdo bangigaagii hore bil ka dib markaad xirto koontadaada oo weydii inay xaqiijiyaan in koontadu wali xiran tahay.
Maxay Dadku Bangiyada u Badalaan?
Dadku waxay u beddelaan bangiyada sababo badan awgood. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay khidmadda bangiga oo xad -dhaaf ah, adeegga macmiilka oo liita, tiknoolijiyada bangiyada oo aad u hooseeya, ama xitaa ATM aan habboonayn.
Marka dhibaatooyinkaas oo dhan raagaan oo bangigu uusan bixin jawaab wanaagsan, dadku waxay ku qasban yihiin inay u beddelaan bangi ka wanaagsan oo leh khibrad bangi oo wanaagsan.
Fikirkaygii Ugu Dambeeyay Waa ..
Haddii aad khibrad xun kala kulantay bangigaaga ama laga yaabee inaadan ku qanacsanayn adeegsiga bangiga, Waad sii socon kartaa oo waad beddeli kartaa bangiyada.
Maqaalkani wuxuu ku tusayaa sida loo beddelo bangiyada iyada oo aan walwal lahayn.
Waxaan rajaynayaa inay tani kaa caawinayso inaad si ka sii wanaagsan u samayso
15 Meesha ugu Jaban ee Jeeg Lacag Lahaa
Sida Loo Kala Saaro Xisaabaadka Bangiyada ee Miisaaniyadda
Sida lacag looga sameeyo Koontadaada Bangiga
18 Beddelka ugu Fiican eBay Kadib Faafida | 2022
20 Personal Finance Excel Template ee 2021
Lacagtu, shaki la'aan, waxay lagama maarmaan u tahay badbaadada. Kharashaadka nolosha aasaasiga ah waa in la buuxiyaa si loo ilaaliyo macquul…
Texas waa mid ka mid ah gobollada ugu weyn Mareykanka. Ilaa 2019, waxay leedahay 29 milyan oo degane…
10 App -ka Miisaaniyadda ugu Fiican Lammaanaha sanadka 2022
In dhaqaalahaaga gaarka ah la xakameeyo waxay noqon kartaa caqabad aad u weyn, sidaas darteed baahida app miisaaniyadeed…
Sida Looga Wareejiyo Lacagta Robinhood Akoonka Bangigaga
U wareejinta lacagta akoon bangi waxa suurtagal ah iyada oo loo marayo qaabab maaliyadeed oo kala duwan, Robinhood-na waa mid…